Okona kulungileyo kwi & t cyber monday deals (2020)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ezona ntengiso zibalaseleyo ze-AT & T Cyber ​​Monday (2020)
Ezona ntengiso zibalaseleyo ze-AT & T Cyber ​​Monday (2020)
UHLAZIYO:NgoLwesihlanu omnyama ngoku kungasekho, kodwa sinako Inkulumbuso 2021 phambi kwethu. Ungajonga eyethu iselfowuni Inkulumbuso ijongana okulindelweyo ukulungiselela umcimbi wokuthenga ozayo!
Inkqubo ye- NgoLwesihlanu oMnyama 2020 kunye ne-Cyber ​​yangoMvulo yokuthenga isahamba kwaye amadili asekhona kwi-AT & T! Eli nqaku liza kukunceda kuthengiso lwakho lobuchwephesha be-cyber ngoMvulo kwi-AT & T, nokuba sele ungumthengi we-AT & T okanye ujonge ukuba banye.
Makhe sijonge kwezona ziphuculo zingcono zangoMvulo weCyber ​​ezikhoyo ngoku kwi-AT & T. Unokufuna kwakhona ukukhangela IVerizon Cyber ​​ngoMvulo ijongana okanye inqaku lethu ngokubanzi kwi Eyona nto ibalaseleyo ngeCyber ​​Monday ijongene nee-smartphones , apho unokufumana ezinye izibonelelo ezinomtsalane kwiifowuni ezininzi, nakwizithwali ezininzi kunye nabathengisi.
Ngayiphi na imeko, ngaphandle kokuqhubela phambili, masikhe singene kwezona zinto zihamba phambili kwi-cyber ngoMvulo we-AT & T!
Iintengiso ze-iPhone ze-AT & T
Iintengiso zeSamsung ye-AT & T
Idili le-AT & T kwezinye iifowuni
Imicimbi ye-AT & T kwii-iPads, iipilisi, kunye nokunxitywa
Idili le-AT & T kwii-iPhones zeCyber ​​Monday
Entsha Ifowuni ye-12 , IPhone 12 Pro , I-iPhone 12 encinci , kwaye i IPhone 12 Pro Max Ngoku zilapha kwaye i-AT & T & Apos; Umnyama ngoLwesihlanu kunye noMsombuluko weCyber ​​zikhona ixesha elihle lokuzifumana, okanye imodeli yakudala ye-iPhone, ngesaphulelo sesisa ngokurhweba ngaphakathi. Unako ukuya kuthi ga kwi-700 yeedola ngokurhweba ngokufanelekileyo kwi-smartphone. Isaphulelo sisetyenziswe kwityala letyala.
Nazi ii-iPhones ngoku ezinesaphulelo kwi-AT & T yeCyber ​​Monday. I-iPhone XS 64GB ikwafumana isithembiso esivulekileyo, nangaphandle kokurhweba ngaphakathi unokufumana i-iPhone XS 64GB ye- $ 1 / mo ngezavenge ezingama-30 ngesicwangciso esingenamda.
Fumana ukuya kuthi ga kwi-700 yeedola ngokurhweba ngaphakathi kunye nesicwangciso esingenamda
$ 700 icinyiwe (64%) Thengisa phakathi$ 39999$ 109999 Thenga kwi-AT & T
Yifumane SIMAHLA ngesicwangciso esingenamda kunye nokurhweba ngaphakathi
$ 700 icinyiwe (100%) Thengisa phakathi$ 0 $ 69999 Thenga kwi-AT & T
I-Apple iPhone 12
$ 700 icinyiwe (88%) Thengisa phakathi$ 9999$ 79999 Thenga kwi-AT & T
I-Apple iPhone 12 Pro
Fumana ukuya kuthi ga kwi-700 yeedola ngokurhweba ngaphakathi
$ 700 icinyiwe (70%) Thengisa phakathi$ 29999$ 99999 Thenga kwi-AT & T
I-Apple iPhone SE (2020)
Fumana i $ 5 ngenyanga ngaphandle kokurhweba ngaphakathi, SIMAHLA ngokurhweba ngaphakathi
$ 250 icinyiwe (62%) Thengisa phakathi$ 150 yeedola 39999 Thenga kwi-AT & T
Yabona Yonke imicimbi yangoLwesihlanu oMnyama kwiiPhones
I-AT & T Cyber ​​NgoMvulo ijongene neefowuni zeSamsung zeSamsung
Abathandi be-Samsung Galaxy abashiywanga belambatha kule ngoMvulo weCyber ​​nokuba. I-AT & T inika izaphulelo ezinesisa kwiiflegi nakumgangatho ophakathi weemodeli ze-Samsung Galaxy. Kulo nyaka, iiGalaxies ezishushu zibandakanya Inqaku le-Galaxy 20 ye-Ultra , uthotho lwe-S20, kunye nokumangalisa IGalaxy Z Fold 2 .
Okwangoku, i-Samsung Galaxy Qaphela 20 ye-Ultra kunye neNqaku 20 5G ziye zathotywa nge-700 yeedola ngokurhweba ngaphakathi, kunjalo ke ngeGlobal S20 Ultra kunye neGPS S20 +. Unokufumana kwakhona i-Galaxy S20 FE enamandla kwi-AT & T simahla, ngokurhweba ngaphakathi. Ukongeza, i-Z Fold 2 entsha ikwafumaneka ngesaphulelo esifanayo: unokufumana i-700 yeedola kuyo ngokurhweba kwi-AT & T.
I-Samsung Galaxy Qaphela i-20
Fumana ukuya kuthi ga kwi-200 yeedola ngokurhweba ngaphakathi
$ 200 icinyiwe (20%) Thengisa phakathi$ 79999$ 99999 Thenga kwi-AT & T
I-Samsung Galaxy Qaphela i-20 Ultra
$ 200 icinyiwe (15%) Thengisa phakathi$ 109999$ 129999 Thenga kwi-AT & T
$ 179999 Thenga kwi-AT & T
Okwangoku, i-Galaxy A51 efikelelekayo kunye ne-Galaxy A71 5G isaphulelo kwi-AT & T.
I-Samsung Galaxy A52
Yifumane i $ 10 nje kuphela ngenyanga ngesicwangciso esingasuswanga
$ 7 isaphulelo (40%)$ 10/ mo$ 1667 Thenga kwi-AT & T
Ndinibone nonke Imicimbi yeSamsung yangoMvulo weSamsung
Idili ye-AT & T kwiifowuni ze-Android ezifikelelekayo
I-AT & T ibonelela nabanye abathengisi be-smartphone ngoMvulo weCyber. Okwangoku, ezinye iifowuni ze-LG zifumana isaphulelo kwi-AT & T, ecaleni kohlahlo-lwabiwo mali lwe-5G-enesakhono kwi-Motorola One 5G, ngoku enesaphulelo sedola ye-10 / mo ngaphandle kwesixhobo sokurhweba. Ukuba urhweba nge-Motorola One 5G, ungayifumana nge- $ 5 / mo.
yifumane i $ 5 ngenyanga, okanye isuke kwi $ 0 ngenyanga ngerhwebo
$ 245 (62%)$ 150 yeedola 39499 Thenga kwi-AT & T
vuka uye kuthi ga kwi-700 yeedola xa usenza urhwebo
$ 700 icinyiwe (78%)$ 19999$ 89999 Thenga kwi-AT & T
IMotorola One 5G
yifumane i $ 10 / mo ngaphandle kokurhweba ngaphakathi; $ 5 / mo ngezorhwebo
$ 145 (33%)$ 300 yeedola99 Thenga kwi-AT & T
Ngoku sibona intengiso enkulu yeCyber ​​Monday kwi IPixel 4a 5G kunye nePixel 5:
I-Google Pixel 5
I-128GB, emnyama nje okanye iSorta Sage, umboniso we-90Hz, i-Snapdragon 765G
$ 450 yeedola 72499 Thenga kwi-AT & T
I-Google Pixel 4a 5G
I-128GB, Mnyama nje, iSnapdragon 765G
$ 300 yeedola 52499 Thenga kwi-AT & T
Yabona Zonke iifowuni zeCyber ​​zangoMvulo
I-AT & T Cyber ​​NgoMvulo ijongana neetafile, ii-iPads, kunye nezinto ezinxitywayo
Intengiso ye-cyber yangoMvulo ye-AT & T ayizizo iifowuni kuphela: ziya kubandakanya izinto ezahlukeneyo, ezinje ngezixhobo ezinxitywayo kunye nee-earpod.
Okwangoku, i-AT & T ibinesithembiso kwi-Apple Watch SE efikelelekayo, esele iphelelwe lixesha, kodwa wena neapos awushiywanga ungenanto okwangoku. I-Apple Watch 3 ngoku isaphulelo kwi-AT & T. Ukongeza, ukuba awukho kwi-Apple Watch, i-AT & T inesivumelwano esihle seBOGO kwiGlass Watch 3- ukuba uthenga ezimbini kwaye wongeza ubuncinci umgca, unokunyuka uye kuthi ga kwi-450 yeedola kwityala lesibini leGlass Watch 3, enokwenza isipho esimnandi kumhlobo okanye ilungu losapho.
I-Apple Bukela i-SE (40mm)
ngokuthengwa kwee-smartwatches ezimbini ezifanelekileyo
$ 0 $ 32999 Iphelelwe lixesha
I-Samsung Galaxy Watch 3 (45mm)
Isivumelwano seBOGO-thenga enye, FUMANA ENYE
$ 479 icinyiwe (50%)$ 47990$ 95899 Thenga kwi-AT & T
Ngokubhekiselele kwi-earbuds, zonke iimodeli ze-AirPod zi-10% isaphulelo ngoku kwi-AT & T yangoLwesihlanu oMnyama:
Iipopu zomoya iApple
$ 20 icinyiwe (10%)$ 17910$ 199Thenga kwi-AT & T
Ngokuphathelele kwi-iPads, i-AT & T inesivumelwano esilandelayo ngoLwesihlanu oMnyama kwi-7th-gen Apple iPad ngoku ngelishwa, iphelile kwisitokhwe okwangoku.
I-Apple iPad 10.2-intshi
ULWESIHLANU omnyama! Funda ukuba ungayifumana njani inguqulelo ye-128GB ukuya kuthi ga kwi-50% isaphulelo!
$ 26499$ 52999 Iphelelwe lixesha
Okwangoku, ezinye iithebhu zeGlass zinesaphulelo. Okwangoku, ungafumana ama-50% kwiGalaxy Tab A 8.4 kunye neGalaxy Tab S5e kwi-AT & T:
I-Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020)
50% isaphulelo$ 11999$ 23999 Thenga kwi-AT & T
50% isaphulelo$ 23999$ 47999 Thenga kwi-AT & T
Zonke ezo zezona ntengiso zibalaseleyo ze-AT & T ekufuneka zinikezelwe ngoku. Sizakugcina ujonge naziphi na izibonelelo ezizodwa ezinokuthi zivele kamva ngeCyber ​​Monday kwaye siza kuhlaziya eli nqaku ngokukhawuleza.
isebenza oneplus 3 isebenza kwiverizon
Qaphela i-10 kunye ne-Android 10
Ukuvota: Yeyiphi iapos eyona iPhone ilungileyo ngalo lonke ixesha? Siyayazi impendulo!
I-Apple Pay vs i-Samsung Pay vs i-Android Pay: ukuthelekisa
Ixabiso lefowuni yeRazer kunye nomhla wokukhutshwa
I-AT & T inokuba ilwa idabi elilahlekileyo ngokuchasene ne-T-Mobile kunye neVerizon kwibala lase-US 5G
I-AT & T ikhupha i-Android Oreo 8.1 ukuya kwiPixel 2 kunye ne-2 XL, uhlaziyo lukongeza ne-HD Voice Calling